Ko chemsex ichave nyowani ngochani yakajairwa yekushanya kweThailand?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Ko chemsex ichave nyowani ngochani yakajairwa yekushanya kweThailand?
Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Chemsex kusungwa muThailand
NeMugovera, varume makumi matanhatu nevatanhatu vakasungwa kuFaros Sauna 62 muBangkok uko mapurisa akawana zvinodhaka, tsono, uye akashandisa makondomu - kurwisa kwazvino pabato re "chemsex".
Varume ava vakasungwa vachityora COVID-19 mitemo yekukiya pamwe nemhosva dzine chekuita nezvinodhaka.
Mukuedza kudzikamisa denda, Thailand yakavhara mabhawa uye makirabhu ehusiku.
Izvi zvinoita kunge zvakakonzera moto wemakemikari emapati munzvimbo dzekugara dzega uye ikozvino munzvimbo dzeruzhinji senge iyo Faros Sauna 2.
Muna Kubvumbi, Hurumende yeThailand yakavhara mabhawa uye makirabhu ehusiku kuyedza kudzikamisa denda iri. Nehurombo, izvi zvakagadzira imwe nyonganiso yehutano hweveruzhinji muchimiro chepiki mumakesi echemsex zvinoenderana nerudo Thomas Reuters Foundation.
Chii chinonzi chemsex?
Ndiwo maitiro ekuva nehukama pamwe nekuvandudzwa bonde revakomana nevarume vakawanda paunenge uri pasi pesimba reimwe mishonga yakaita sekristal meth, mephedrone, uye GHB. Iyo ine mukana wekuve wakakura kunetsa sezvo iri ine simba pane kuve uine mashoma madoro eshamwari neshamwari. Chemsex vashandisi vari zvakare panjodzi yekupindwa muropa nezvinodhaka uye kuwandisa, pamwe nezvinetso zvehutano hwepfungwa, hutachiona hweHIV, uye mhirizhonga kusanganisira kurohwa kwepanyama uye nezvimwe. Uye inzvimbo yakasarudzika-yakapfuma kupfuudza iyo COVID-19 coronavirus yakatenderedza.
Kunyangwe vezvenhau vaine chekuita nevashanyi vekumadokero vari kutora chikamu mune chemsex muThailand, muchokwadi, hapana kana vashanyi vekunze munyika izvozvi, uye runyorwa rweavo vangosungwa haruna kusunungurwa.